Mpifaninana Mozambikana nahazo ny fifaninanana bodybuilding manerantany tao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2019 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, русский, Swahili, Italiano, Português
Nandresy tamin'ny fifaninanana bodybuilding iraisampirenena notanterahana tany Hong Kong, tamin'ny 17 Avrily lasa teo, ilay atleta mozambikana Bruno Saraiva.
Nandray anjara tamin'ny sokajy miisa telo izy tamin'ny fifaninanana Bodybuilding tao Hong Kong: bika atletika lehilahy, bika manendrika indrindra ho an'ny lehilahy, maodelim-panatanjahatena lehilahy. Kasaina hotontosaina amin'ny 23 jona ho avy izao ny fifaninanana.
Zohian'olona mihoatra ny 24 000 ao amin'ny kaontiny Instagram, maodely ho an'ny mpanabokonozatra ao Mozambika i Bruno, izay monina ao an-drenivohitra Maputo.
Araka ny filazan'ny Wikipedia rehefa manondro ny bodybuilding:
Naneho ny hafaliany tamin'ny nahazoany loka tao Hong Kong i Saraiva tao amin'ny tsanganana Instagram:
Tamin'ny tsanganana hafa anefa i Bruno nampahatsiahy indray ny fahasarotana nianjady taminy talohan'ny nahatongavany tao Hong Kong: